ट्रेन यात्रा को बाइपास ग्रेस
धेरै यात्री कम उडान वा पूर्ण विमान यात्रा बाहिर काटन आफ्नो कार्बन पदचाप कम रोजेको, predominantly स्वीडिश मूलमंत्र प्रतिक्रिया टिकट लाज (उडान लाज). यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि मौसम परिवर्तनमा अब हवाई यात्रा सब भन्दा द्रुत बृद्धि गर्ने योगदानकर्तामध्ये एक हो. उडान सधैं हामी यात्रा गर्न छनौट कसरी एक निर्णायक खेलाडी हुनेछ हुनत, हामी सम्झाउन आवश्यकता छ भनेर यात्रा प्रस्ताव सनसनीपूर्ण अन्य प्रकारका पर्यावरण बिदा.
रेल यात्रा अनुग्रह माहोल bygone एक nostalgic छ र एक शक्तिशाली छ पर्यावरण-मैत्री यात्रा पहल. यसलाई थप legroom सहित लाभ को एक सीमा प्रदान गर्दछ, एक भोजन कार मा डाइनिंग सुन्दर दृश्यहरु आनन्द लिई रहनुभएको बेलामा, बच्चाहरु संग यात्रा टाढा सजिलो र सम्पर्कमा रहन चाहने ती लागि हो, त्यहाँ कुनै उडान मोड छैन. रेल यात्रा गर्न unequivocally equates जिम्मेवार यात्रा.
स्थानीयलाई सहयोग पुर्‍याउनु मात्र एक होईन पर्यावरण अनुकूल यात्रा पहल तर यो पनि एक समुदाय उत्थान योगदान छ. स्थानीय खरीद कसैले ती सामान ओसारपसार गर्न थियो भन्ने हो. अझ बढी, स्थानीय कारोबार फस्टाउनको लागि अवसर. यो एक कम कार्बन पदचिह्न हो र स्थानीय समुदायको जीत.
तपाईंको भाग खेल्न अर्को तरिका दिगो यात्रा को यात्रा किरा मा एक नजर छ छ. एक पर्यावरण अनुकूल यात्रा किरा एक बांस टूथब्रश को संभवतः समावेश हुनेछ, शैम्पू बारहरू, र नुहाउने जेलको सट्टा बार साबुन. लघु शैम्पू र कन्डिशनरहरू र पुन: प्रयोज्य स्पिल-प्रुफ टम्बलरहरू. एल्युमिनियम पानीका बोतलहरू महत्त्वपूर्णसँगै धातुको पराल छन्.
सबैभन्दा ठूलो यात्रा रुझान 2020 experiential यात्रा यात्रा गर्न नयाँ तरिका हो भन्ने संकेत. अघि सर्नु, यो क्लासिक हो. यो अनुभव कि लागि कोठा बनाउँछ प्रदर्शन संस्कृति, गतिविधिहरु, र गन्तव्यहरु मा एक अद्वितीय अन्तरदृष्टि.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “कसरी यात्रा पर्यावरण हितैषी मा 2020?” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/travel-eco-friendly/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
इकोफ्रेंडली ट्रवेल इकोटोरिज्म europetravel greentransport सार्वजनिक यातायात जिम्मेदार रेल यात्रा